mahaboke | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
mahaboke	← Older posts
# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . .Published December 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 19 Comments	# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော?Published October 14, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, နာမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ, ယိချင်း, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဒီလို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဟောခဲ့ဘူးသည်Published October 12, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နဲ့ လူငယ်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမှု၊ မာန်မာနထောင်လွှားမှု၊ ယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲမှုတွေ များပြီး မပြောသင့် ၊ မလုပ်သင့် တာတွေ လုပ်မိခဲ့တာကို နောင်တ, ရမိလို့ ရေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလို နိဒါန်းချီ နေရသလဲ ဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါးကို အမှတ်တမဲ့ ဖတ်ကြည့်ရင် ဒီဆရာ ကြွားလုံးထုတ် ထားတာလို့ ထင်မိမှာ စိုးလို့ပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်ဘ၀ နဲ့ လူကြီးဘ၀ စိတ်ဓာတ် ခံယူမှုခြင်း၊ အတွေး အခေါ်ခြင်း ကွာခြားလာတာကို ဖော်ပြချင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ရဲ့ အကြောင်း About Me ထဲမှာ ရေးထားသလိုဘဲ ကျွန်တော်ဟာ (၈)တန်းကျောင်းသား ဘ၀လောက်မှာ စာအုပ်တွေ လျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့ “လက္ခဏာ” စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်မိလိုက်ရာကနေ “လက္ခဏာပိုး” ၀င်သွားတယ်ဗျာ။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ “လက္ခဏာဆရာတွေ” သာ ထင်ပေါ် နာမည်ကြီးနေပြီး “ဗေဒင်ဆရာတွေ” လမ်းဘေး ရောက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့ဗျာ။ ထွက်လာသမျှ စာအုပ်တွေကလည်း “လက္ခဏာ” စာအုပ် တွေက များတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ဂဏန်းဗေဒင် စာအုပ်တွေလည်း ထွက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုလက္ခဏာ စာအုပ်ဖတ်၊ ဒီလက္ခဏာ စာအုပ်ဖတ်နဲ့ ဖတ်ပါများလာတော့ ဟောချင်လာတယ်ဗျ။ စကားပုံ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ “သူခိုးရွှေရ ၊ တပြပြ” တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း လက္ခဏာ ပညာလေး မတောက်တခေါက် တတ်လာတော့ ဟိုလူ့လက် ဆွဲကြည့်၊ ဒီလူ့လက် ဆွဲကြည့်ပေါ့ဗျာ။ လူတော်တော် များများကလည်း လက္ခဏာဗေဒင် ၀ါသနာမပါသူက ခပ်ရှားရှားဗျ။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေ ပိုဆိုးတယ်။
Posted in ဟူးရားဗေဒင် | Tagged k.p hura, mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	# အောက်တိုဘာလအတွက် ဟောကိန်းများPublished October 5, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
“အောက်တိုဘာလအတွက်(၇)ရက်သားသမီးဟောကိန်းများ” ကို အပေါ်ဘက်က “လစဉ်ဟောကိန်း” များထဲမှာ ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ဒီလဟာ (၇)ရက် သားသမီးများ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ လ,တစ်လ ဖြစ်တာမို့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စေလိုပါသည်။
(အောက်တိုဘာလ)(၇)ရက်သားသမီး ကံဇာတာအကျဉ်းချုပ် = စနေသားသမီး ၊ ရာဟုသားသမီး (အလွန့်အလွန်ညံ့)
= ကြာသပတေး သားသမီး (အလွန်ညံ့)
= ဗုဒ္ဓဟူး၊ တနင်္လာသားသမီး (ညံ့)
= တနင်္ဂနွေ သားသမီး (သင့်)
= သောကြာသားသမီး (ကောင်း)
= အင်္ဂါသားသမီး (ပိုကောင်း)
အထက်ပါ အကောင်း/အညံ့များမှာ မိမိယခုရောက်ရှိနေသော “သက္ခတ်” (သို့) “သက်ရောက်ဂြိုဟ်” ကောင်း/မကောင်း” အပေါ်တွင် အဓိက မူတည် ပါသည်။ လူတိုင်းအတွက် မဆိုလိုပါ ။ မိမိ ယခုရောက်ရှိနေသော “သက္ခတ်” ကောင်း/မကောင်းကို “ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ -(၂)” ဆောင်းပါး၏ စာမျက်နှာ နံပါတ် (၁)ကို ကူးယူပြီး ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဟောကိန်းများသည် “မဟာဘုတ်ပညာ၊ မဟာကာလကြီးပညာ” များဖြင့် တွက်ချက်ဟောပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရိုး နက္ခတ်ဗေဒင်၊ အနောက်တိုင်း ရာသီခွင်ဗေဒင်၊ ဂဏန်းဗေဒင် ပညာများ ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာရပ် စစ်စစ်များဖြင့် တွက်ချက် ဟောပြောမှုများ ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ် Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, အမှာ သတင်းစကား, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |4Comments	# ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး စနေ (၂)Published October 1, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး စနေ ဆောင်းပါးရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ စာဖတ်သူတွေထဲက ဒီသက္ခတ်တွေထဲရောက်တာကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ် လာကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လို ယတြာချေရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ်။ အဲဒါအတွက် စာရေးသူဟာ “ကိုယ်တိုင် သက္ခတ် အလွယ်ကြည့်နည်း နဲ့ ယတြာများ” ကို Media Fire ဆိုဒ်ထဲမှာ Upload တင်ထားပြီး Download Link ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ရှာမတွေ့တဲ့ သူ ရှိသလို Download ဘယ်လို ယူရမယ်ဆိုတာ မသိတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ Download ပေးထားတဲ့ PDF ဖိုင်တွေကို Jpg ဖိုင်ပြောင်းပြီး အောက်မှာ တင်ပေး ထားပါတယ်။ အောက်က ပုံ (5)ပုံ ပါ။ ဒါကို ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှ ပြန်ကူးချင်ရင် ပုံပေါ်မှာ Mouse နဲ့ Right Click ထောက်ပြီး နှိပ်လိုက်ရင် Drop down item လေးတစ်ခု ကျလာပါမယ်။ အဲဒီထဲက Save Image as . . ကို နှိပ်ပြီး ဒီပုံကို ကိုယ့်ကွန်ပျူတာပေါ်က Desktop ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြား Folder တစ်ခုခုထဲဖြစ်ဖြစ် Copy လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါမှ မရှင်းသေးရင် ကွန်မန့်ထဲမှာ ၀င်မေးပါ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 23 Comments	# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများPublished September 20, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	(၀)ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွားများအကြောင်း အလှည့်ကျလာပါပြီ။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က (၀)ကြွင်းသမား ဖြစ်နေတော့ “ဆန်ရင်း နာနာဖွပ်” ဆိုတဲ့ စကားလို ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းရတော့မယ့် အလှည့် ရောက်ပြီ ပေါ့။ (၀)ကြွင်းသမားတွေဟာ အကြမ်းဖျဉ်းပြောရရင် ရုပ်ပိုင်းရော၊ စိတ်ပိုင်းပါ အားနည်းပျော့ညံ့ ကြသူတွေ များပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင် မှုဘက်မှာလည်း အားနည်းတတ်တာ များတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ကြံ့ခိုင်မှု မှာလည်း အားနည်းတတ်တာ များတယ်။ စိတ်နုတယ်။ စိတ်ထိခိုက် လွယ်တယ်။ ၀မ်းနည်းလွယ်တယ်။ မျက်ရည် ကျလွယ်တယ်။ ကိုယ့်ကို မကောင်းပြောခံရရင် တနုံ့နုံ့ တွေးပြီး စိတ်ဆင်းရဲ နေတတ်တယ်။ လောကဓံ တရားကို သိပ်ခံနိုင်ရည် မရှိတတ်ကြဘူး။ စိတ်ဆတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ထိပါး ပုတ်ခတ်လာရင် ချက်ခြင်း တုန့်ပြန်တတ်ကြသူများ ဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ (၀)ကြွင်းဖွား တွေဟာ ဒေါသသိပ်ကြီးတတ်ကြပြီး အမှားတွေ လုပ်မိကာ နောက်မှ နောင်တ ရတတ် ကြတာမျိုး တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၀)ကြွင်းတွေထဲမှာ ကြာသပတေး(ရာဇ) နဲ့ အင်္ဂါ (မရဏ)တို့ကလွဲရင် အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စ ရှုတ်ထွေးမှု သိပ်မရှိတတ်ကြဘူး။ အင်္ဂါ နဲ့ ကြာသပတေး တွေကတော့ အရှုတ်များတတ်တယ်။ ကျန်တဲ့ နေ့ဖွားများကျတော့ များသော အားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲမှု နည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် (၀)ကြွင်းဖွား အင်္ဂါသမီး (မရဏ)ဖွား များကြတော့ အိမ်ထောင်ရေးကံ တော်တော် ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခုလပ်၊ မုဆိုးဖို၊ မလွတ်လပ်သူများနဲ့ တွေ့ကြုံတတ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးမှာ အမြဲစိတ်ဆင်းရဲတတ်ကြတာများပါတယ်။ လင်ဆိုးများတတ် ရတတ်တာကို သတိထား ရပါမယ်။ (၀)ကြွင်းတွေထဲမှာ တနင်္ဂနွေ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး သားသမီးတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ ယေဘူယျ ပြောရရင်တော့ (၀)ကြွင်းဖွားတွေမှာ ယောင်္ကျားလေး တော်တော်များများကတော့ အိမ်ထောင်ရေး ကံ ကောင်းကြ ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ် အရမ်းချစ်တဲ့ မိန်းမမျိုးတွေနဲ့ အိမ်ထောင် ကျတတ်တယ်။ မိန်းကလေး (၀)ကြွင်းဖွားကျတော့ အိမ်ထောင်ရေး နဲနဲ ညံ့တတ်ပါတယ်။ (၀)ကြွင်းသမားများဟာ များသောအားဖြင့် ဘ၀ကံ ကောင်းကြပါတယ်။ သိပ်ကြီးမားတဲ့ လောကဓံမျိုးတွေ တွေ့ရခဲပါတယ်။ သိပ်မချမ်းသာတောင်မှ လက်ထဲမှာ ငွေမပြတ်တတ်ကြပါဘူး။ ငွေကြေး ကံကောင်းကြတာ များတယ်။ အခက်အခဲ ဒုက္ခ တွေ့ရင်လည်း သိပ်အကြာကြီး မခံရဘဲ လွတ်မြောက် သွားကြပါတယ်။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို ရေရှည်ခံစား နေရတာမျိုး တွေ့ရခဲပါတယ်။ လောကဓံ အလွန်များပါတယ်ဆိုတဲ့ (4)ဂဏန်းသမားများတောင် (၀)ကြွင်းဖြစ်နေရင် အခြား (4)သမားတွေ ထက် သက်သာပါတယ်။ အခက်အခဲကြုံရင် ကိုယ့်ကို ကူညီမယ့်သူ အမြဲရှိတတ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ (၀)ကြွင်းသမားတွေရဲ့ စာရင်းကတော့- ရှိတ်မူဂျီဘူရာမန် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သမ္မတဟောင်း)၊ ရစ်ချတ်နစ်ဆင် (အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း)၊ ဖရန်စစ်ဖာဒီနန် (ပထမ ကမ္ဘာစစ်မီး တောက်လောင်စေခဲ့တဲ့ လုပ်ကြံခံ အိမ်ရှေ့မင်းသား)၊ ဟောလီဝုဒ် မင်းသားကြီး ဟင်နရီဖောင်ဒါ၊ ဂျာမန် သိပ္ပံပညာရှင် ဟိန်းနရစ် ဟာ့ဇ်၊ စာရေးဆရာကြီး အိုက်ဇက် အက်ဆီမော့ဗ်၊ အာကာသထဲကို ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံနိုင်ငံသား ယူရီဂါဂါရင် ၊ လူထူးဆန်း သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဟောင်းဝပ်ဟူး၊ Apple ပန်းသီးကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ စတီဗင် ပေါလ်ဂျော့၊ ပလူတိုဂြိုဟ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သူ နက္ခတ်ပညာရှင် ကလိုက် တွမ်ဘော့ ၊ Discovery Channel သရုပ်ဆောင် မိကျောင်းမုဆိုး စတိဗ် အာဝင်၊ ဟောလီဝုဒ် သရုပ်ဆောင် ကီဗင် ကော့စ်နာ၊ ကယ်လ်ဖိုးနီးယား ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့ အက်ရှင်မင်းသားကြီး အာနိုးလ် ၊ နာမည်ကျော်ကြားချိန်မှာ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့ ဟောင်ကောင် ကွန်ဖူး မင်းသားကျော် ဘရုစ်လီ ၊ ဟောလီဝုဒ် အက်ရှင်မင်းသားကြီး ဘရုစ်ဝီလီ ၊ ပြိုင်ကားမောင်း ချန်ပီယံ မိုက်ကယ် ရှုးမေကာ၊ အမေရိကန် လူမည်း အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ် ၊ ဂေါ့ဖ် ချန်ပီယံ အကျော်အမော် တိုက်ဂါးဝုဒ် ၊ အခုလက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်းသမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား ၊ ဘောလုံး စတားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပီတာဆက်ခ်ျ၊ မိုက်ကယ် အက်ဆီယန် ၊ ဟာနန် ခရက်စပို၊ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဂျင်မ်ကာရေး၊ အက်ရှင် မင်းသမီး အင်ဂျလီနာဂျိုးလီ၊ ဟောလီဝုဒ် သရုပ်ဆောင် ဒစ်ဇယ်ဝါရှင်တန်၊ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ်၊ လက်ရှိ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်၊ Accident နဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ လေဒီဒိုင်ယာနာ၊ တစ်ခေတ်က အလွန်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဟောလီဝုဒ် မင်းသမီး မာရီလင် မွန်ရိုး ၊ ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အာဝင်ရွန်းမဲလ် ၊ ဂျူး (၆)သန်းကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အဒေါ့ဖ် အိုက်ခမန်း၊ လေယာဉ်ပျက်ကျ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကုလသမ္မဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒက် ဟမ္မားရှိုး ၊ ကမ္ဘာကျော် ဘီတဲလ် တေးဂီတ အဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူ လေးဦးထဲမှာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျွန်လီနွန်၊ စိတ်သရုပ်ခွဲပညာရှင် ဆစ်ဂမန်ဖရွိုက်၊ မော်တော်ကားတာယာတွေကို တီထွင်ခဲ့သူ ချားလ် ဂွတ်ရီးယား၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ၀ုဒရိုး ၀ီလ်ဆင်၊ စာရေးဆရာကြီး ဂျော့ဘားနတ်ရှော ၊ ပန်းပုပညာရှင် ပီကာဆို၊ ဗြိတိသျှ အယ်လီဇဘက် ဘုရင်မကြီး၊ ကျူးဘားသမ္မတ ဖီဒယ် ကတ်စထရို ၊ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဆွီဒင် ၀န်ကြီးချုပ် အိုလော့ပန်း ၊ ကမ္ဘာကျော် ဘရာဇီး ဘောလုံးသမားကြီး ပီလီ၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဟယ်ရီ အက်စ် ထရူမင်း ၊ စာရေးဆရာကြီး မက်ခ်တွိန်း ၊ ကြက်ခြေနီ အသင်းကို စတင်တည်ထောင်သူ ဟင်နရီ ဒူးနန့်၊ ရုရှား စာရေးဆရာကြီး လီယို တော်လ်စတွိုင်း၊ ကမ္ဘာကျော် သဘောင်္သူဌေးကြီး အိုနာစစ် တို့ဘဲ ဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာ။
ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ် (ကွန်ပျူ- ဗေဒသုခုမ)
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 36 Comments	# (၆)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများPublished July 9, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၆) ဖြစ်ပါက (၆)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက် မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ်ပါက (၆၃၉) ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
(၁)ကနေ (၅) အထိ အကြွင်းဖွားတွေအကြောင်း ရေးပြီးတဲ့အခါ (၆)ကြွင်းဖွား အကြောင်းကို ဆက်တိုက်ရေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ရေးရမှာ လက်တွန့်နေလို့ ဒီလောက်တောင် အချိန်တွေကြာသွား ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ် မြန်မာ သက္ကရာဇ် (၁၃၇၁)ခုနှစ်ဟာ (၆)ကြွင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေသာ (၆)ကြွင်း အကြောင်းကို ဖတ်မိရင် စိတ်ပူပန် ကြောင့်ကြ သွားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ အချိန်ဆွဲလာတာ အခု ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ရေးလိုက်ရပါပြီ။
(၆)ကြွင်း အကြောင်းကို ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မရေးချင်ရတာလဲ? ရေးဖို့ လက်တွန့်နေရတာလဲ? အကြောင်းရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ (၆)ကြွင်းဟာ အကြွင်း (၇)ခုထဲမှာ ဘဝလောကဓံလှိုင်း အများဆုံးရိုတ်ခတ်ခံရတဲ့ အကြွင်းဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
(၆)ကြွင်းတွေဟာ မွေးလာပြီဆိုကတည်းက ဘဝလောကဓံနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပါတော့တယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အခါကတည်းက မိခင်၊ ဖခင်ဖြစ်သူများမှာ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး တွေ အဆင်မပြေကြပါဘူး။ သူတို့ မွေးဖွားလာတဲ့အချိန် (သို့မဟုတ်) မွေးဖွားပြီး မကြာချိန်မှာဘဲ မိဘတွေမှာ လောကဓံလှိုင်းနဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ စီးပွားကျ၊ ရာထူးကျမယ်၊ အိမ်ထောင်ကွဲမယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ကြမယ်။ အရွယ် ရောက်လာရင် ရန်သူများမယ်။ အတိုက်အခံများမယ်။ လုပ်ကြံချောက်တွန်းမယ့်သူများမယ်။ ဒါတွေဟာ (၆)ကြွင်းဖွားတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
မွေးဖွားပြီး (၁၀) နှစ်အတွင်းမှာ မိခင်ဖခင်မစုံတော့ဘဲ သေကွဲရှင်ကွဲဖြစ်ရတဲ့ ကလေးတွေအများစုဟာ (၆)ကြွင်းဖွားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ လိုက်တာက (၃)ကြွင်းဖွားပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေများကို (၆)ကြွင်း နှစ်နဲ့ (၃)ကြွင်းနှစ်တွေမှာ ကလေးမယူကြဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးဖြစ်ကြတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဖြစ်များတာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်လေ့လာပြီး ရာခိုင်နှုံးတွက်ကြည့်တာအရ မိဘမစုံတဲ့ (၆)ကြွင်းဖွား ရာခိုင်နှုံးဟာ (၆ဝ)% လောက်ရှိပါတယ်။ (၃)ကြွင်းဖွားရာခိုင်နှုံးက (၃၅)% လောက်ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အကြွင်းဖွား(၅)ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သိပ်မကွာပါဘူး။ (၁ဝ)ကနေ (၁၅)% လောက်အတွင်းမှာဘဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အသက် (၁ဝ)နှစ် အတွင်းမှာ ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကို ကိုယ်မရပ်နိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာ မိခင် (သို့) ဖခင်တစ်ဦး ဆုံရှုံးရတယ်ဆိုတာ ကလေးငယ်တစ်ဦးအတွက် အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ လောကဓံရိုက်ချက် တစ်ခု မဟုတ်ပါလားဗျာ။
အဲသည်လိုမှ မိခင်ဖခင် မဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင် မိဘတွေ စီးပွားကျခြင်းဒဏ်ကိုလည်း ခံစားရတတ်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ (၆)ကြွင်းဖွား ကလေးငယ်တွေဟာ ငယ်စဉ်ကာလမှ ယုယကြင်နာသူ နည်းတတ်ကြတယ်။ မိခင်၊ ဖခင် ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ အဖိုးအဖွား၊ ဦးလေးဒေါ်လေး တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို သိပ်မရကြတာများတယ်။
အရွယ်ရောက်လာလို့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ရုန်းကန်ရပြီဆိုတော့လည်း (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ အခက်အခဲများစွာနဲ့ ရုန်းကန်ကြရ တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အတောင်အလက်စုံလာလို့ ဘဝအဖေါ်ရှာလို့ အိမ်ထောင်ပြုကြပြီဆိုရင်လည်း (၆)ကြွင်းဖွား တွေဟာ အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ အနှောင့်အယှက် များစွာကြားထဲက အိမ်ထောင်ပြုကြရတယ်။ ပြီးပြီလားဆိုတော့ မပြီး သေးပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေကြလို့ အိမ်ထောင်ကွဲကြပြဲကြ တာမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အထဲမှာလည်း (၆)ကြွင်းဖွားတွေက အများဆုံးပါဘဲ။ (၆)ကြွင်းဖွားဆိုရင် အိမ်ထောင် (၂) ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်း များတယ်။ နောက်တစ်ခုက မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ ဖြစ်လွယ်တယ်။
ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါဆို (၆)ကြွင်းဖွားတွေက ဘာကောင်းတာ ကျန်သေးလဲလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ အဲဒီ အမေးအတွက် အဖြေကလည်း ရှိပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဗေဒင်ဆောင်းပါးတွေ ဟာ သူများရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်-ကူးချ- စိတ်ထဲပေါ်တာရှောက်ရေးတာမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လူဦးရေ ရာပေါင်းများစွာကို လက်တွေ့ သုတေသနပြုပြီးမှ ရေးတာပါ။ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေတွင် မကဘဲ ကမ္ဘာပေါ်က ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူအားလုံးရဲ့ နာမည် နဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်တွေကို လေ့လာစစ်ဆေးကြည့်ပြီးမှ ကိုယ်ပိုင်မူအဖြစ် ရေးသားထားတာချည်း ပါ။
ဒီလို သုတေသနလုပ်ကြည့်တော့ (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ ဘဝလောကဓံကို ခံရလွန်းအားကြီးလို့လားမသိပါဘူး။ နာနာ ရိုက်ပုတ်ခံရတဲ့ အိုးဟာ ပိုပြီး ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပေါ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံးလူတွေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် တွေကို မဟာဘုတ်ချကြည့်ပြီး သုတေသနလုပ်ကြည့်တော အံ့သြစရာကောင်းတာက (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ တကယ့်ကို ဆရာကြီးတွေ၊ အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အရေအတွက်လည်း အများဆုံး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကလည်း သူများလိုက်မမှီအောင် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ပါတယ်။
(၆)ကြွင်းဖွားမှန်ရင် ဘဝတစ်ချိန်ချိန်မှာ အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာလည်း လောကဓံ လှိုင်းတစ်ခုက လာပြန်ပါတယ်။ ဒီလို ရုတ်တရက် မြင့်မားသွား တဲ့ အခြေအနေရောက်လာပြန်ပြီဆိုရင်လည်း (၆)ကြွင်းဖွား အတော်များများဟာ အောက်ခြေလွတ်ကုန်ကြတာမျိုးဖြစ်ကြပြန်ရော။ ငါတည်းဟူသော မာန်မာန အလွန်ထောင်လွှားလာကြ ပြန်ပါရော။ အဲဒီ အချိန်မှာ အမှားတွေများများ လုပ်မိလာတတ်ကြတယ်။ အမှားတွေ သိပ်များလာတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ဆုံး မှာတော့ အကြောင်းအကျိုး နိယာမအရ လောကဓံတရားကြီးက သူတို့ကို အမြင့်ဆုံးကနေ အနိမ့်ဆုံးကို ပြန်ပစ်ချ လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီအခါမှာ (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ အလွန်နိမ့်ကျတဲ့ ဘဝမျိုးကို ရောက်သွားရပြန်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်အခုပြောနေတာတွေကို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်က ရင်နှီးသူတွေထဲက-
(၁) ငယ်စဉ်ဘဝမှာ မိစုံဘစုံ မနေခဲ့ရသူတွေရယ်
(၂) အိမ်ထောင်ကွဲပျက် ၊ အိမ်ထောင်ဆက် များနေသူတွေရယ် ၊
(၃) လောကဓံတရားအကြီးကြီးတွေနဲ့ ခဏခဏတွေ့ကြုံနေရသူတွေ၊ တွေကြုံ ရင်ဆိုင်ပြီးခဲ့ရသူတွေ -
သူတို့တစ်တွေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ကိုတောင်းကြည့် ပါ။ (အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ဆိုရင်) မြန်မာလို ပြန်ပြောင်း- (၇)နဲ့စား။ အကြွင်းကို မှတ်ထား။ အနည်းဆုံး လူ (၂ဝ-၃၀)လောက်လေ့လာကြည့်။ အဲဒီအထဲမှာ (၆)ကြွင်းဖွားက အများဆုံးဖြစ်နေတာကို လက်တွေ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်ဆီပြန်ပြီး စောဒကတက်ပါ။ ဒုတိယ အများဆုံးက (၃)ကြွင်းဖွားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
(၆)ကြွင်းဖွားတွေရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်များကတော့ ကတိပေးလွယ်ခြင်း၊ ပေးပြီး ကတိကို မတည်ကြည်ခြင်း၊ အလုပ် တစ်ခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲမလုပ်လိုခြင်း၊ အပျော်အပါးများခြင်း၊ အသုံးအဖြုန်းကြီးခြင်း၊ ပေါ်ပင်လုပ်ငန်းဟူ သမျှ ရှောက်လုပ်လိုခြင်း၊ အလွန်ကြီးပွားချမ်းသာလိုခြင်း၊ ထို့ကြောင့် ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် မမှန်မကန်သော အလုပ်များကို လုပ်မိခြင်း၊ တွေးခေါ်စဉ်းစား ခြင့်ချိန်မှု နည်းပါးခြင်း၊ ကိုယ်အောင် မြင်ကျော်ကြားနေချိန်မှာ ဘယ်သူ့အကြံပေးချက်မှ နားမ၀င်တော့ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်လုပ်ခြင်း၊ အတ္တကြီးခြင်း၊ ကိုယ့်တစ်ဘို့ထဲသာ ကြည့်တတ်ခြင်း၊ ခေါင်းအလွန်မာခြင်းများဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် စရိုက်မျိုး၊ အထူးသဖြင့် ဖြောင့်မှန်ပြီး ကတိတည်ကြည်တဲ့ (၆)ကြွင်းဖွားတွေ ကျပြန်တော့လည်း အလွန့်အလွန် အောင်မြင်တာကို တွေ့ပါတယ်။ ဒီလို ဆန့်ကျင်ဘက် စရိုက်ဟာ တစ်ချို့ကျတော့လည်း မွေးရာပါ ပါလာပြီး၊ တစ်ချို့ကြလည်း ကျင့်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလူမျိုးတွေကျလည်း အလွန်အောင်မြင် ကြီးပွားတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ စကားတည်၊ ကတိတည်ပြီး ကိုယ်ကျိုးထက် အများအကျိုး ကို ကြည့်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရင် ကျန်အကြွင်းဖွားတွေထက် အောင်မြင် ကျော်ကြားလွယ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ ကိုယ့်အမှား နဲ့ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို သိမြင်လွယ်သူတွေမဟုတ်ကြဘူး။ အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ (၆)ကြွင်းဖွားတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေ ကို ကိုယ်တိုင် (၆)ကြွင်းဖွားဖြစ်သူတစ်ဦးက ဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီဟောချက်တွေဟာ လုံးဝမမှန်ဘူးး၊ မှားတယ်လို့ ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် (၆)ကြွင်းဖွား တစ်ယောက်နဲ့ အနီးကပ်ပေါင်းသင်း ဘူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သူနဲ့ပေါင်းနေသူဟာ (၆)ကြွင်းဖွားမှန်းသိသွားတာနဲ့ ဒီဟောချက်တွေဟာ သိပ်မှန်တယ်လို့ ပြောလိမ့်မယ်။ (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ ကိုယ့်အမှားကိုယ် အလွန် သိနိုင်ခဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်အပေါ်မှာ မကောင်းကြဘူး။ ကိုယ်ကဘဲ သိပ်ကောင်းတယ်၊ သိပ်မှန်တယ်လို့ ထင်နေကြသူကများတယ်။
(၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ “ပါးစပ်၊ စကား၊ ကတိ၊ အာမခံ၊ အကြွား၊ ငွေကြေးကိစ္စ”တို့ကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ ငွေနဲ့ သိပ်တည့်တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေများများဝင်လာရင် လူပျက်စီး တတ်ပါတယ်။ ဒုက္ခတစ်ခုခုတွေ့တတ်ပါတယ်။ (၆)ကြွင်းဖွား လည်းဖြစ် မွေးဂဏန်းက (4)ဏန်းသမား နဲ့ (9)ဂဏန်းသမား တွေဖြစ်နေရင်တော့ သိပ်မလွယ် လှပါဘူး။ တစ်ယူသန်သမား တွေဖြစ်ပြီး ဖြောင့်ဖျ ပြောဆိုဖို့ အလွန်ခက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့ အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်နေရသူ တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ (၆)ကြွင်းဖွားတွေရဲ့ စာရင်းကတော့ – ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပွဲကြီးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာမာမိုတို၊ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မိုဟာသီယာမိုဟာမက်၊ ဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း အိုက်စင်ဟောင်းဝါး၊ ရုရှားအလှမယ် အင်နာကော်နီကိုဗာ၊ ဟောလီးဝုဒ် Sex မင်းသမီး အင်နာနီကိုးစမစ်၊ လုပ်ကြံခံ ရတဲ့ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘင်နာဇီယာဘူတို၊ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဘင်နီနိုအကွီနို၊ သေဒဏ်ပေးခံရတဲ့ အာဏာရှင်မွတ်ဆိုလိုနီ၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်၊ အဆိုကျော် ဘရစ်တနီစပီးယား၊ အဆိုကျော် ဆယ်လိုင်းဒီယွန်၊ ပြင်သစ်သမ္မတ ချားလ်ဒီဂေါ၊ ကရာတေးမင်းသား ချတ်နောရစ်၊ တရုပ်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တိန့်ရှောက်ဖိန်၊ ဂရုဏာရှင် သူနာပြုဆရာမကြီး ဖလော့ရင့် နိုက်တင်ဂေး၊ ဟောင်ကောင်မင်းသား ဂျက်ကီချန်း၊ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား ဂျင်းကလောက် ဘန်ဒိန်း၊ နာဇီစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂျိုးဇက်ဂိုးဘဲလ်၊ နိုဘယ်ဆုရှင် နယ်လဆင်မန်ဒဲလား၊ ဂျိမ်းစဘွန်းမင်းသား ပီးယားဘရော့စ်နန်၊ ခမာနီ လူသတ် ခေါင်းဆောင် ပိုလ်ပေါ့၊ စာရေးဆရာကြီး ၀ီလီယံဖော့ကနား၊ ရုရှားဘုရင်မကြီး ကတ်သရင်းသဂရိတ်၊ တင်းနစ်ချန်ပီယံ ရော်ဂျာဖက်ဒရာ၊ အင်္ဂလန်ဘောလုံးလက်ရွေးစင် သီအိုဝယ်လ်ကော့၊ နောက် ရှောင်ရိုက်ဖီးလစ်၊ ဂျိုလ်ကိုး၊ ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကြီးမင်းသား ဂျွန်ထရာဗိုလ်တာ၊ အက်ရှင်မင်းသားကြီး ဆီဗက်စတာ စတားလုံး၊ အမေရိကန် ဘီလျံနာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၊ အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ၊ ရောဘတ်ကနေဒီ၊ အီဂျစ်သမ္မတကြီး အန်ဝါ ဆဒတ် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ – မိုဟာသီယာမိုဟာမက်၊ ဟိုချီမင်း၊ တိန့်ရှောက်ဖိန်၊ ဖလော့ရင့် နိုက်တင်ဂေးလ်၊ နယ်လ်ဆင် မန်ဒဲလား၊ မဟတ္တမဂန္ဒီ စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကျတော့ ကိုယ်ကျိုး စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီး၊ အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရတဲ့ (၆)ကြွင်းဖွားများဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိုဟာသီယာမိုဟာမက် တစ်ယောက်က လွဲရင် ကျန်သူအားလုံးဟာ လောကဓံ အလွန်များခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ တိန့်ရှောက်ဖိန်ဆိုရင် အာဏာရှင်မော်စီတုန်း ရှိနေစဉ်မှာ အပြင်းအထန် နှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
ရာမာမိုတို၊ အင်နာနီကိုးစမစ်၊ ပိုလ်ပေါ့၊ ဂျိုးဇက်ဂိုးဘဲလ်၊ မွတ်ဆိုလိုနီ၊ အန်ဝါဆဒတ် တို့ကျတော့ (၆)ကြွင်းဖွား စရိုက်တွေကြောင့် ဇာတ်သိမ်းမကောင်းခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပြီး၊ ဘီလ်ကလင်တန်တို့၊ ဘရစ်တနီစပီးယား တို့ကျတော့ နာမည်ပျက်အရှက်ကွဲဖြစ်ရခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပျက်၊မိသားစုဖရိုဖရဲဖြစ်ရတာတွေဟာလည်း (၆)ကြွင်းဖွားတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ ညဉ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်း အဆောက်အဦး ကန်ထရိုက်လောကမှာ နာမည်ပျက်ပြီး ကျဆုံးသွားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ပွဲရုံလောကမှာ မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီး နာမည်ပျက်၊ ကတိပျက်ပြီး ထွက်ပြေးရတဲ့ ကုန်သည်ကြီး တွေထဲမှာ (၆)ကြွင်းဖွားတွေက အများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ မှတ်တမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ (၆)ကြွင်းဖွားတွေဟာ ကြီးပွားလိုစိတ်ပြင်းထန်ပြီး မနိုင်ဝန် ထမ်းတတ်တာကို သတိပြုကြပါ။
နောက်ဆုံး စေတနာကောင်းနဲ့ သတိပေးလိုတာ (၆)ကြွင်းဖွားဖြစ်ရင် ကတိတည်ခြင်း၊ စကားမှန်ခြင်း၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နည်းလမ်းနဲ့ ကြီးပွားလိုခြင်း၊ အလုပ်တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တတ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ဖက်သူ့ဖက်မျှတအောင် ကြည့်တတ်ခြင်း၊ အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်း(အလှူကြီးကြီးပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်)၊ အကြွားမပါခြင်း၊ စကားမဖွာခြင်း၊ လိင်ကိစ္စမရှုတ်ထွေးခြင်း တို့ကို ဗီဇကတည်းက ပါလာသူဖြစ်စေ၊ လေ့ကျင့် ယူလို့ရရှိလာသည် ဖြစ်စေ မိမိအကျင့် စရိုက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် အလွန်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်း၊ နာမည်ကြီးခြင်းများကို အခြားအကြွင်းတွေထက် ရလွယ်၊ ဖြစ်လွယ်သူများဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 22 Comments	# Pop ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် နှင့် နာမည်ပက္ခတ်မိခြင်းPublished June 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
လူသားအားလုံးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ဘဲ နာမည်ကြီးကြီး၊ ချမ်းသာချမ်းသာ၊ သြဇာ ကြီးကြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော့်လိုဘဲ “မရဏ” ဆိုတဲ့ သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဆိုတာ သတိရပြီး နေရစ် ခဲ့ကြပါ။ ကျွန်တော်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှု၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု တွေကို ဘာတစ်ခုမှ ယူမသွား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးထားရစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ယူသွား နိုင်တာကတော့ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ “ကုသိုလ် နဲ့ အကုသိုလ်” ဆိုတဲ့ အရာ(၂)ခုတည်းပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကုသိုလ် နဲ့ အကုသိုလ်ကို ချိန်ခွင်လျှာတင်ပြီး အစစ်ဆေးခံရပါဦးမယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ မှာဘဲ နေခွင့်ပြုမလား၊ ငရဲဘုံကို အပို့ခံရမလားဆိုတာ ကျွန်တော် မသိသေး ပါဘူး။ ဘာမှ ရေရာမှုမရှိတဲ့ တိုတောင်းလှတဲ့ လူ့ဘဝမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ကြုံတွေ့ရမယ့် “သေခြင်းတရား”ကို အမြဲအမှတ်ရ နေကြပြီး၊ တမလွန်မှာ ကိုယ်နဲ့အတူ အမှန်တကယ်ယူဆောင်သွားရမယ့် ကုသိုလ်တရားကိုသာ များများယူသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး နေရစ်ခဲ့ကြပါတော့ ခင်ဗျား။ – - – (မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်)
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 1 Comment	# အာမက်ဒီနီဂျက်ဘဲ ပြန်နိုင်မှာပါ , သို့သော် ….Published June 12, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကနေ့(၁၂)ရက်နေ့မှာ လက်ရှိ သမ္မတ အာမက်ဒီနီဂျက်နဲ့ ပြိုင်ဘက် သမ္မတ လောင်းတို့ဟာ အကြိတ်အနယ် မဲဆွယ်ပြီး မဲပေးပွဲ စတင် နေပြီ ဆိုပါလား။ အီရန် သမ္မတ “အာမက် ဒီနီဂျက် ” ဆိုတာလည်း တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့် ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ လေးကို အီရန်နိုင်ငံ မှာ မဲပေးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ “မဟာကာလကြီး” ဇာတာနဲ့ ကောက်တွက် ကြည့်လိုက်တော့ အာမက်ဒီနီဂျက်ဘဲ ပြန်နိုင်ဖို့ များတယ်ဗျ။
မဟာကာလကြီးနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ဇာတာခွင်ကို ကြည့်ပါ။
ဇာတာဖွဲ့ချိန်= ၁၈နာရီ၊ ၃၄ မိနစ်။ ဇွန်လ (၁၂)ရက်၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်။ လဂ်နံပါတ် = ၁၈
တူလဂ်ဖြစ်ပြီး စရလဂ်ဖြစ်လို့ အားကောင်းတဲ့ လဂ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လဂ်သခင် သောကြာဟာ ရန်အိမ်ဖြစ်တဲ့ သိဂ်ရာသီမှာ (၁၁)တန့်မှာ ရပ်တာဟာ အတော်အားကောင်းတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟူးရားဇာတာတွေမှာ (၁၁)တန့်ဟာ နောက်ဆုံး အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အိမ်မျိုးဖြစ် နေတတ်ပါတယ်။ ရန်အိမ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခက်အခဲ အတိုက်အခံရှိပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ သူရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ (၁ဝ)တန့် ဘာဝကိုမှာ ကြာသပတေးဟာ “ဥုစ်” ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး သူ့အိမ်ရှင် တနင်္လာဂြိုဟ်ကို (၂)တန့်မှာထားပြီး (၅)တန့်အမြင်နဲ့ မြင်နေတဲ့ အမြင်ဟာ အလွန်အား ကောင်းတဲ့ သမ္မန္ဓဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အလုပ်ဟာ သမ္မတအလုပ်ဆိုတော့ (၁ဝ)တန့်ဟာ အရေးပါပါတယ်။ (၁ဝ)တန့်အိမ်ရှင်လည်းဖြစ်၊ ဟူးရာဗေဒင်မှာ အရေးပါတဲ့ဂြိုဟ် လည်းဖြစ်တဲ့ စန်းဟာ မိတ်အိမ်ဖြစ်တဲ့ ဗြိစ္ဆာရာသီမှာ အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်နဲ့ပူးယှဉ်နေတာလည်း အင်မတန် အားကောင်းတဲ့ ယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, ဟူးရားဗေဒင် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 1 Comment	# (၅)ကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားများ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများPublished June 2, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၅) ဖြစ်ပါက (၅)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက်မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီဖြစ်ပါက (၆၃၉) ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
(၅)ကြွင်းဖွားတွေကတော့ အကြွင်းအားလုံးထဲမှာ နဲနဲ ထူးခြားတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံအရ အရပ်အမောင်း သိပ်မြင့်မား တာ မတွေ့ရတတ်ဘူး။ အသက် (၄ဝ) ကျော်လာရင် ကိုယ်ခန္ဓာ ဝဖြိုးလာတတ် တယ်။ များသောအားဖြင့် ဥပတိရုပ် ကောင်းကြတယ်။ ရုပ်ချောတာ၊ မချောတာ ထက် ခန့်ညားမှုရှိပြီး လူအထင်ကြီးလွယ်တတ်တဲ့ ဥပတိရုပ်မျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။ (ချွင်းချက်= အသက် (၄ဝ)ကျော်လို့မှ ဝဖြိုးမှု ရှိမလာတဲ့ (၅)ကြွင်းဖွားများဟာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုသော်၎င်း ၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှုသော်၎င်း ဖြစ်နေကြတာကို အတွေ့ရများတတ်ပါတယ်)
(၅)ကြွင်းဖွားတွေဟာ လူထူးလူဆန်းတွေလို့ ခေါ်ရမယ်ထင်တယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာ အပြင်ပန်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပေါင်းသင်းနိုင်တယ်။ လူကြားသူကြားထဲမှာ သွားလာထွက်ဝင် နိုင်တယ်။ လူသိအလွန် များတတ် တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တစ်တွေဟာ အတွင်းစိတ်အရ အထီးကျန်လွန်းလှတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ နေရတဲ့သူတွေဟာ လုပ်ငန်းသဘော၊ လူမှုရေးသဘောအရသာ ပေါင်းသင်းနေရပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ ဝါသနာ မတူသူတွေက ပိုများနေတတ်တယ်။ သူတို့ ဘဝမှာ ဝါသနာတူ အဖော်ကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း အလွန်ရှားတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာလည်း သူတို့ရဲ့ စရိုက်ဝါသနာကလည်း တခြားသူတွေနဲ့ မတူလှဘဲ တစ်မျိုး တစ်ဘာသာ ဖြစ်နေတာ ကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို သူတို့က ဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေပါလဲ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 1 Comment	# (၄)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများPublished May 29, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၄) ဖြစ်ပါက (၄)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက်မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီဖြစ်ပါက (၆၃၉)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |3Comments	# (၃)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများPublished May 19, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၃) ဖြစ်ပါက (၃)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက်မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ်ပါ က (၆၃၉)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
(၃)ကြွင်းဖွားများသည် မြင့်မားသော ဥပတိရုပ်နှင့် ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ရှိကြသော ရုပ်အဆင်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် လူအများအကြား တွင် သိသာထင်ရှား ပေါ်လွင်သော ဥပတိရုပ် နှင့် အဆင်းသဏ္ဍန်မျိုး ရှိတတ်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် များကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အမြဲသွက်လက် ဖြတ်လတ်နေကြသူများ ဖြစ်ပြီး စိတ်အားထက်သန်မှု အလွန် မြင့်မားကြသည်။ တိုးတက်ကြီးပွားလိုစိတ် ပြင်းထန်ပြီး အလုပ်ကို မနေမနား လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူ များလည်း ဖြစ်ကြသည်။
(၃)ကြွင်းဖွားများ၏ ငယ်စဉ်ဘဝသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းကြသည်က ပိုများသည်။ သူတို့ မွေးဖွားလာကြချိန်တွင် မိဘာများ အိမ်ထောင်ရေး ပဋိပက္ခဖြစ်နေချိ်န်မျိုးသော်၎င်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေကြချိန်များ ဖြစ်တတ်ကြသည်။ အချို့မှာ မိခင်၊ ဖခင်များ မစုံလင်တော့ဘဲ မိတစ်ကွဲ ဘတစ်ကွဲ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ မိမိမွေးဖွားပြီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိဘ တစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်သွားသော (၃)ကြွင်းများကိုလည်း အများအပြားတွေ့ရတတ်သည်။
ထိုသို့ (၃)ကြွင်းဖွားများ၏ ပထမအရွယ်သည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလေ့ ရှိတတ်ကြသော်လည်း ဒုတိယ၊ တတိယ အရွယ်များတွင် ကောင်းစားတတ်ကြလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် (၃)ကြွင်းဖွား များသည် ဒုတိယအရွယ် နှင့် တတိယအရွယ် အစပိုင်း (အသက် ၂၅ နှစ် မှ ၆၅နှစ်) အတွင်း လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကောင်းစားတတ်ကြသည်။ သို့သော် နာမည်အင်အား နည်းပါးခြင်း နှင့် ဘ၀အဆုံးသတ် ကံကြမ္မာ မကောင်းသော နာမည်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါက တတိယအရွယ်အဆုံးတွင် ကြီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးများ အလွန်ဆုတ်ယုတ် ကျဆင်းတတ် ပြန်ပေသည်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 10 Comments	# (၂)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ၀ိသေသလက္ခဏာများPublished April 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၂)ဖြစ်ပါက (၂)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို မသိပါက ကိုယ်မွေး သော ခရစ်ခုနှစ်ထဲမှ (၆၃၈) ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ့် မွေးရက် မွေးလသည် မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီဖြစ်လျှင် (၁)တိုးပြီး (၆၃၉)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)အတွင်းမွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |5Comments	← Older posts
3 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.